कथा : सडकका वेदनाहरू
निराजन अधिकारी धम्मे र सडक । सायद यी दुई शब्द एकअर्काका लागि पर्यायवाची नाम थियो । धम्मे एउटा सडकले हुर्काएको र सडकले नै बाँच्न सिकाएको करिब ८ वर्षीय पात्र । काँधमा बोरा र पिठ्यँुमा भाइ बोकेर दिनदिनै सडक र गल्ली चाहार्नु उसको बाध्यता थियो । उसका लागि भूत, वर्तमान र भविष्य तीनै चीज अन्धकार थिए […]
माधव पौडेल छिमेकीले जङ्गे पिल्लर सारिसक्यो यता सीमा चेपेर हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षे..
सचिन रानाभाट नेताज्यूको चर्को भाषण सुन्ने दिन फेरि आयो चैत वैशाखको घाम खाँदै ताली पिट्ने द..
कथा : फिलिङ लभ इन हस्पिटल
केशवप्रसाद पाण्डे हजुरको छोराले ठीक गर्न नसकेको रोग ठीक गर्ने म छु नि आमा अब । उसले मेरो आ..
कथा :के यो माया हो ?
दीपक घिमिरे उसको नाममा हरियो बत्ती पिलिक्क भयो । म खुसीले किच्च गरेँ । झुण्डिइरहेका नोटिफि..
कविता : भ्रष्ट नेता
आशीष बोहोरा चुनाव आयो घरघरमा आउँछन् ती नेता जितेपछि माथिबाट हेर्दैनन् ती यता नाम जस्तो काम यिनले गर्या छैनन त्यहाँ संविधान त उपन्यास भएछ कार्यान्वयन भएन यहाँ देशको ढुकुटी रित्तै पारी कहिले फिर्छौ यता करोडौँ भ्रष्टाचार कहिले छाड्ने ? भनिदेउन नेता झुलाउँदैछौ जनतालाई लहैलहैको तालमा कति पार्छौ जनतालाई छलकपटको जालमा गर्नुसम्म गरिसक्य..
भावना प्रसाईं व्यस्त दैनिकीले नैतिक दिनहुँजसो थकित हुन्छ । परिवारलाई राम्रोसँग समय दिन सकेको छैन उसले । अब त उसलाई, घर परिवारभन्दा पनि काम नै प्रिय लाग्न थालिसकेको छ । बेलुका घर जाँदा बच्चाहरु सुतिसक्छन अनि आफू बिहान घरबाट निस्किँदा उठेकै हुँदैनन् । कसैको पिता भएर पनि पिता हुनुको महसुससम्म थिएन उसलाई । श्रीमतीको सामीप्यताको [&he..
थिएटर मलमा देखाइयो नाटक ‘क्लाउन शो’
काठमाडौं – सुनधारास्थित नाटकघर थिएटर मलमा जर्मनीबाट आएका रंगकर्मीको ‘क्लाउन शो’ प्रदर्शन गरिएको छ । सोमबार विश्व बालरंगमञ्च दिवस मनाउने क्रममा यो नाटक देखाइएको हो । बालबालिकालाई नाटकघर लैजाऔं, उनीहरु पनि देख्न, सुन्न, महसुस गर्न, सोच्न र कल्पना गर्न सक्छन् भन्ने अभियानका साथ यो नाटक देखाइएको हो । क्लाउन नाटक जर्मनीबाट आएका अन्तर..
लन्डन– लन्डनको ‘स्पिकर्स कर्नर’मा साहित्यकार कृष्ण बजगाईंको नियात्रा सङ्ग्रह ‘युरेसियाको स्पर्श’ सार्वजनिक गरिएको छ । साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलेन्द्र शर्माले पुस्तक सार्वजनिक गरेका हुन् । समारोहमा शर्माले अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि कानूनद्वारा संरक्षित ऐतिहासिकस्थल स्पिकर्स कर्नरबाट पुस्तक सार्वजनिक गर्न पाउँ..
बुँख्याचा मन : नेपाली समाजको सजीव चित्रण
सविता सापकोटा सर्वनाम नाटकघरमा मञ्चन भइरहेको नाटक ‘बुँख्याचा मन’ हेर्ने तीव्र इच्छासँगै नाटक घरमा पुगेँ । नाटकबारे सामाजिक सञ्जालका चलेको हल्लाले नै नाटक घरसम्म पुर्यायो । राज शाहको लेखन तथा निर्देशन रहेको नाटकमा दुई साथीहरुको मित्रतामा बाधक भएर आएको जातीय छुवाछूतलाई प्रस्तुत गरिएको छ । यो नाटक एउटा नाटक मात्र नभई नेपाली समाजको ..
गजल : सिमाना मेटिँदैछ
इ. राकेश कार्की दुर्भाग्य सिमाना मेटिँदै छ नेपालको गला रेटिँदै छ नेपाली अनुहार हराउँदै छ विदेशी अनुहार भेटिँदै छ देश तीनतिरबाट पेलिँदै छ चङ्गा झैँ दशगजा चैटिँदै छ बैमानी राष्ट्रले हल्लाउँदै छ सानो यो मुलुक फाटिँदै छ आऊ अब भिडौँ आऊ अब भिडौँ थिच्नेसँग हाम्रो सिमाना मिच्नेसँग ए नेमकिपा, जनमोर्चा, राप्रपा खोस्दै उसको देश सिच्नेसँग [..
कथा : चालीस कटे’सी रमाउँला–२
दीपके मिमिरे डिप्टी जानै मन थिएन । कम्पनीबाट अहिलेसम्म सात पटक फोन आइसक्यो । उठाको छैन, अब म्यासेज लेखेर भएनी छुट्टी माग्ने मुडमा छु । तर के लेख्ने अनि कसलाई लेख्ने ? बङ्गाली फोरम्यानले अङ्ग्रेजीसम्म बुझ्दैन, उसको बङ्गाली भाषा लेख्न मलाई आउँदैन । एकैछिन हातमा मोबाइल खेलाएर कुनामा फालिदिएँ । उतै बजिरहयो, दर्जन जति मिसकल [&helli..
कथा : गुमनाम प्रेमिका
सुवास संयम असारको दोस्रो हप्ता, अलि ढिलोसम्म काम गर्नुपर्ने मेरो अफिस । त्यस दिन केही छिटो गरी करिब पाँच बजेतिर निस्किएँ । अस्ताइसकेको सूर्य । दिनभरको गर्मी भुलाउने चिसो बतास चलेको थियो अद्वैतमार्गमा । सिरसिर चलेको बतासले आफ्नो थकान उडेजस्तै मन फुरुङ्ग भयो । घर पुग्ने साधन कीर्तिपुरको गाडी खोज्दै सीधै पुरानो बसपार्कतिर लागेँ । [..
कविता : देशको रात
इ. सन्तोष पोखरेल जहरको पिएको रात मरी मरी जिएको रात उपल्लो छिमेकबाट निशाचरको भेकबाट मडारिँदै छाएको अनाहकमै पाएको नीरव तर कहरको रात । अँध्यारो ! निस्पट्ट अँध्यारो ! बाटो बहुतै अप्ठ्यारो म दिशाविहीन अनि छैन यकिन कसैमा सत्य छ टड्कारो जे होला देखाजाला ! सब छोरा भए मतवाला दूर क्षितिजमा झुकेको आशा मेरो लुकेको खै […]
कोमल भट्ट संसारमा लाख विकार रैछ दुष्कर्म वा द्वेष अपार रैछ रोजै छ हिंसा अनि मारमुङ्ग्री सङ्कीर्णताको तरबार रैछ जैलेसुकै अग्र छ लाभहानी नाता र सम्बन्ध पुछार रैछ संहारमै मस्त छ शक्तिशालि सोचाइमा नाश बिगार रैछ सर्वत्र देखिन्छ अधर्म मात्रै अश्लीलताको भरमार रैछ हेर्दा छ राम्रो मनमा छ कालो कप्टी तथा क्रूर विचार रैछ समृद्धिवाला [&helli..
सोसियो–पोलिटिकल उपन्यास हो ‘अवतार’ : लेखकसँग अन्तर्वार्ता
पत्रकार तथा लेखक शिखर घिमिरेको पहिलो उपन्यास ‘अवतार’ केही समयपछि बजारमा आउँदैछ । उनका कृति फरक प्रस्तुतिका कारण रुचाइएका कथामा पर्छन् । पछिल्लो समय नेपालमा उपन्यास लेखनकोे ‘फेसन’ बढेको छ । यही सन्दर्भमा प्रकाशन हुन लागेको उपन्यासलाई लिएर रातोपाटीले शिखरसँग गरेको छोटो कुराकानी : पहिलो उपन्यास लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, कस्तो लागिरहेको..
गजल : ‘मन लागि राछ’
#8211; मित्र नेपाली वर्षातको पानीसँगै रुझ्न मन लागि रा’छ आजकाल देशको हाल बुझ्न मन लागि रा’छ युवा जति पलायन, बूढापाका अशक्त छन् नेता जति बेखबर छन् सुझ्न मन लागि रा’छ देश बनाउने नीति छैन विदेशीका कुरा सुनी समृद्धिको भारी बोक्छन् बुझ्न मन लागि रा’छ जताततै भ्रष्टाचारका कस्तो अभिशाप यस्तो चालले देश बन्दैन बुझ्न मन लागि […]
कविता : ‘सार्भभौम देशमा पूर्वनागरिक’
#8211; सहिल मैनाली सुन ए ! देशभक्तिका भजन मन्डलीहरु हो, फर्केर आउँदैछन् स्थापितबाट विस्थापित भएकाहरु कोलमा निभुवा पेलेर अमिलो रस निकाले झैं आफ्नै हड्डी निचोरेर जम्मा गरेको नुनिलो पसिना बोकेर । बन्सोले जेलेको बाँझो खेत र खोरियाले सदियौँ भो मानव पाइतालाको स्पर्श नपाएको फर्केर आउँदैछन् लेक, बेँसी, टार र टाकुराका रैथानेहरु आफ्नै बा..
कविता : ‘समय र हामी’
#8211; पुष्कर बराल घडीको सेकेन्ड नियाल्दा नदीको रफÞ्तार नियाल्दा रोकिएनन् यिनीहरु रोकिउन पनि कसरी रोकिन्छन् जब हामीले देख्ने छैनौँ हामी नै हुन्नौ संसारमा रहने छैन अस्तित्व समाप्त हुन्छ तब संसार नै । नदी त समयसँगै बग्यो ऋतु त समयसँगै बदलियो बदलिए धेरै पश्चिमी मुलुकहरु अनि सभ्यता र मानिसहरु न जुनले भुल्यो, न भुल्यो ऋृृतुले भुलेन ..
कविता : दक्षिणले सधैँ सताउँछ
इ. राकेश कार्की सीमाना हराएको मेरो देश तीनतिर खुल्ला, छैन बन्धन त्यसैले सन्तुलन हराएको छ तानिरहेछ तीनतिर हुँदाहुँदा बुद्धिजीवी नेताहरु पनि उतै तानिन्छन् प्रफुल्ल हुन्छन् त्यहाँका ठूलाठालुसँग भेट्न पाउँदा लज्जावती फूलझैँ चाउरिन्छन् उनीहरुको पाउ मोल्दा बिर्सन्छन् भुसुक्क आफ्नो स्वाभिमानलाई, राष्ट्रिय पोसाकलाई, राष्ट्रिय झण्डालाई, ..
कथा : मिस्टर राइटर
शिवराज श्रेष्ठ पागल हुन्छन् कि क्या हो ! यी राइटरहरु । किन र ! के भयो दिज्यू ? ब उसको एउटा कथाकी पात्र छे, नर्मदा । उसकी श्रीमती नीला नयन भएकी पातलो वदन अनि कालो लामो कपाल, ठ्याकै म जस्तै देखिने भन्दै थियो । त्यसैले मलाई त पागलै लाग्यो । उहाँको नर्मदा बनेर तपाईं पनि […]
कथा : टुहुरी केटी
हरि थापा प्रत्येक दिन कलेजमा पहिलो भेट निशासँग नै हुन्थ्यो । के छ हालखबरबाट कुरा अगाडि बढ्थ्यो । घर परिवारको विषयमा कुरा सोध्न खोज्दा ऊ असहज मान्थी । त्यसैले मैले खोतल्न पनि चाहिन । उसले सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क पढेको कुरा पनि भनेकी थिई । पढ्न असाध्यै त्तेज थिई । शिल स्वभावकी भएकी गाउँलेको छोरी आर्थिक […]
कथा : सहिद दिलबहादुरको परिवार
दीपक घिमिरे राति देखेको सपनाले दिलु अहिलेसम्म झस्किन्छे । गोठबाट एक अँगालो दाउरा लिएर भान्सामा छिरी । अलिकति कागज पोको पारेर अँगेनामा आगो सल्काई अनि कराई बसालेर दूध बसाली । भान्सामा उसलाई छटपटी भयो । बाहिर पिँढीमा थचक्क बसी, मजेत्रोले निधार पुछी । फेरि भित्र अँगेनामा गएर दुइटा दाउरा थपी । बाहिर आएर दलिनमा भएको […]
कथा : गृहमन्त्रीको वेश्यालय भ्रमण
भावना प्रसाईं चेलीबेटी बेचबिखन अभियानविरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुन गइरहेको थियो । यो तीन दिने कार्यक्रमको उद्घाटनका लागि गृहमन्त्रीलाई प्रमुख अतिथिका रुपमा निम्त्याइएको थियो । पानसमा बत्ती बालिसकेपछि आशन ग्रहण गरेका उनलाई मन्तब्यका लागि कार्यक्रम उदघोषकले पुनः आमन्त्रित गरे । गृहमन्त्री अर्थात् कार्यक्रमका प्रमुख अति..
कथा : विश्वासघात
बाबुराम पन्थी बाआमाको एक्लो छोरा अमीत निकै खाइलाग्दो थियो । पढाइमा अब्बल अमीतले आईकम पास गर्ना साथ लोकसेवा पास गरी नायव सुब्बाको नोकरी हात पारेको थियो । आफूले नोकरी सुरू गरेपछि बिहे गर्ने सोच बनायो । त्यो दिन अमीतको बिहे पञ्चेबाजा घन्काएर गर्दा उसका बाआमा कम्ता खुशी थिएनन् । बिहेपछि घरजम गरेर खान सक्ने खालको […]
समाजपिच्छे फरक छाउघर
सविता सापकोटा केही महिनाअघि प्रकाशित छाउघर उपन्यासको नामले नै मलाई त्यो पुस्तक पढ्न प्ररित गर्र्याे । राज सरगमद्वारा लिखित फाइन प्रिन्टले बजारमा ल्याएको यो पुस्तक छाउघरमा १२ वर्षे बालिकादेखि अन्य उमेरका छाउ हुने महिलेले भोग्ने दुःख, कष्ट, भोक, प्यास, डर, त्रास र नारीहरुको बाध्यताको चित्रण गरिएको छ । छाउ, महिवारी, मिन्स बारे बुझ्..
कथा : धर्मपुत्र
हरि थापा चिसो मौसम, आकाश धुम्म भएर पानी पर्लाझैँ अँध्यारो थियो । अफिसको काम खाजा खाने फुर्सद पनि थिएन । लामो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले चक्काजाम, हड्ताल बल्ल खुलेको थियो । सडक अस्तव्यस्त थियो । हड्ताल खुलेको पहिलो दिन अफिसमा हाजिरी भइयो सबै काममा लागिपरेका थिए । बल्लतल्त कामलाई यथावत राखी भोलि पुनः हाजिर […]
गीत : मेरो दिलको अवस्था
राकेश कार्की मेरो दिलको अवस्था कसरी बताऊँ मायालु तिम्रो निम्ति धरतीमा जून खसाऊँ मायालु केही केही भएजस्तो फूलको तरेलीले छोएजस्तो धेरै खुसी मलाई पनि भरोसा तिमी मै जुनी जुनी मेरो दिलको अवस्था कसरी बताऊँ मायालु माया धेरै लागे जस्तो मन तिमीसँगै भागे जस्तो मैले फेर्ने सासमा पनि तिमी नै आउँछ्यौ जीवन बनी मेरो दिलको अवस्था […]